Windscape: Kutsvaga Vhidhiyo Game Ine Rinoburitsa Zuva | Linux Vakapindwa muropa
nzvimbo yemhepo iri zita rekutsvaga kwekushanya, uko iwe kwaunogona kutoona mune izvi Youtube tirera kuziva zvishoma zvishoma nezve iri zita iro rinosvikawo kune kugoverwa kweGNU / Linux kana zvese zvikaenda sezvazvinofanira kuita. Iyo yekutanga-munhu vhidhiyo yemutambo zita uye musimudziri, iye wechiGerman Dennis Witte, atozivisa zuva chairo rekuburitswa mu2019. Pasina kupokana, nhau dzakanaka.
Kana iwe usingazive Dennis, Iye ane mukurumbira mushambadzi anga ave achibatanidzwa mune mamwe mazita akadai seThe Legend of Zelda, Chakavanzika cheMana, Golden Ax Warrior, nezvimwe. Naizvozvo, haisi chero munhu, uye chokwadi ndechekuti wongororo dzinoverengerwa nezve Windscape haina kushata zvachose. Ehe musoro wenyaya unenge uripo paValve's Steam chitoro (zvakare paHumble Store), sezvazvinowanzoitika. Nekuda kweiyo rese rakasimba basa rekuvandudza, apa iwe unogona kuona iyo turera iyo yandakakusiira iwe kune ino zita uye kushambadzira uye kuongorora uko kunosvika anenge makore matatu gare gare kubvira kwaro basa kwatanga. Kuzvipira kwakaiswa naDennis zvirokwazvo kunoyemurika, uye ndinovimba anobudirira uye basa rakaomarara rinobhadhara. Tichazviona, muchidimbu, apo iyo March 27 iyo pre-kuburitswa inoitwa yemapuratifomu Nintendo Chinja uye Xbox One.
Rangarira kuti mumutambo uyu iwe une zvakasikwa zvakasikwa zvine dhizaini dhizaini, inoyevedza graphic nyika iyo iwe yaunofanirwa kuongorora uye kuitsvaga, ine inonakidza kurwisa, matambudziko nematokisi. Zvese zvinhu kubva pakuona kwema protagonist, murwi wechidiki ichave iyo yaunofanira kubata ...
Kana iri yekutsigirwa kweLinux, iyo yaungave uchishamisika, iwe unogona kuona kuti rutsigiro rwuri kuuya futi. Iyo injini yemifananidzo inoshandiswa kune iyo Windscape zita iri Kubatana 3D, iyo sekuziva kwako ine rutsigiro rweLinux, uye zvinoenderana neruzivo kubva kune mamwe maemail kubva kumugadziri, zvinoita sekunge kutarisirwa kutarisirwa kwenzvimbo yeLinux kunogoneka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Windscape - Yekutsvaga Vhidhiyo Mutambo Ine Rinoburitsa Zuva